Ny fitsaharan'ny fadim-bolana dia tahaka ny dingam-piainana rehetra : tsy maintsy atrehana. Ny sakafo ara-pahasalamana dia tsy misy dinganina, indrindra indrindra ho an'ny vehivavy. Ny tenantsika aloha no voalohany indrindra hanaja ny tontolo iainana. Miaro tena amin'ny aretin-mandringana, ary miaro ny hafa ihany koa.
Mpampianatra sy mpianatra manomana fanadinam-panjakana anaty fihibohana
Naseho ny : 25 mey 2020
Mila manaiky ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpanabe hoe tsy fidiny izao zavatra mitranga izao. Mila misaotra an'Andriamanitra ihany koa hoe mbola velon'aina afaka mampita fahalalana amin'ny mpianatra. Tsy tokony hohadinoina fa raha tsy mahay ny ankizy, tsy vahaolana ny sazy ; ary indrindra indrindra mila mahay mandray lesona amin'ny zava-mitranga. Mila mahery, mila manam-pinoana sy fanantenana.
Naseho ny : 4 mey 2020
Ireo fomba samihafa entina miatrika ny fihibohana ao an-trano, na eto an-toerana na any ivelany, manerana izao tontolo izao, dia tokony heverina ho mahasoa sy manampy antsika rehetra, izay maniry fivorana hatrany.
Andron'ny vehivavy eran-tany
Naseho ny : 23 marsa 2020
"Izaho sy ianao, isika rehetra, miombon'andraikitra hisitrahan'ny vehivavy ny zony". Mila mamantatra ny zon'ny vehivavy hita ao amin'ny : "CONVENTION UNIVERSELLE adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies", tamin'ny 18 decembre 1979 isika rehetra : na lahy na vavy, mba hanampiana ny vehivavy hitovy zo amin'ny lehilahy amin'ny fanajana ny hasina maha olona. Tsy raisina intsony ny miralenta fa fitovian-jo mifototra amin'ny maha lahy sy maha vavy no tanjona.
Pejy 9 amin'ny 13